ကွာလတီ မဂ္ဂဇင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » ကွာလတီ မဂ္ဂဇင်း	5
Posted by Thit San Khant on Feb 10, 2013 in Poetry |5comments
ကဗျာတစ်ပုဒ် တွေ့လို့ တွေ့ညား
မဂ္ဂဇင်းထဲ လှန်လို့ ဖွေရှာ
မင်းသမီးချော ဗျူး သတင်းပင်။
လက်ထောက်ကြည့်ပါ တွေ့မှာ ကြော်ညာ။
ဒါတင်မက နှုတ်ခမ်းနီတို့ သည်းသည်းလှုပ်စေ
ဤစာမျက်နှာ မည်သို့ ကျော်စေ
အိုဘယ့် ကဗျာ ဘယ်ဆီမှာများ
About Thit San Khant
Thit San Khant has written 8 post in this Website..
ကျွန်တော့်ကြောင့် သစ်ဆန်းခန့် ဆိုတဲ့ လူကြောင့် တစ်စုံတစ်ယောက် ပျော်သွားရတယ်
ဆိုရင်ဖြင့်.... ကျွန်တော် ပြုံးနေမှာပါ ပီတိတွေနဲ့ အတူပေါ့...
View all posts by Thit San Khant →	Blog
Mr. MarGa says: ကွာလတီ ကွာလတီ
စက္ကူ ကွာလတီ ကောင်းတယ်
မားကတ်တင်း ကွာလတီ ကောင်းတယ်
ရသစာတွေ၊ ကဗျာတွေက မော်ဒယ်လေးတွေကြား ရောက်နေရှာတယ်
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ကဗျာ က ရှေ့နားက စာမျက်နှာ တချို့မှာ
ခိုကပ် နေတတ်တာလေ ….
ကဗျာကို ဖတ်တဲ့လူလည်း နည်းမယ် ထင်ပါရဲ့ …
ခေါင်း အရသာ ထက် …
မျက်စိ အရသာ ကို ပိုနှစ်သက်ကြသူ များမယ် ထင်ပါရဲ့ ….
မောင်ပေ says: ကွာလတီ
TheWinner says: မှန်လိုက်လေ—
ခိုင်ဇာ says: မြန်မာ မဂ္ဂဇင်းထဲတော့ ရွှေအမြုတေပဲဖတ်တယ်။ ဒါတောင် သူက ကဗျာမပါဘူး။
ကိုယ်ကလည်း ကဗျာက နည်းနည်းဝေးသူမို့ အတော်ပါပဲ။